Mpanamboatra sy mpamatsy rafitra manapotika andriamby
Andriamby Corner amin'ny fampifandraisana ireo rafi-pandrefesana andriamby na lasitra vy
Ny Magnet Corner dia ampiasaina amin'ny lasitra vy mahitsy miendrika "L" roa na mombamomba ny fanakatonana andriamby roa amin'ny fihodinana. Ny feet fanampiny dia tsy voatery hanatsara ny fifamatorana eo amin'ny zorony magnt sy ny lasitra vy.
Steel Lever Bar amin'ny famoahana ireo andriamby manosika Push / Pull
Steel Lever Bar dia fitaovana mifanaraka amin'ny famoahana ny andriamby bokotra manery / manintona rehefa mila mamindra azy. Izy io dia novokarin'ny fantsom-bato avo lenta sy lovia vy tamin'ny alàlan'ny tombo-kase sy ny fantsom-panafody.
350KG, 900KG Loaf Magnet ho an'ny vy vy mialoha ny vy na ny fanakatonana ny gitara
Loaf Magnet dia karazan'andriamby mihidy miaraka amin'ny mofo. Izy io dia ampiasaina hifanaraka amin'ny bobongolo vy na ny fikatonan'ny trondro. Ny adaptatera manerantany dia afaka manohana ireo andriamby loaf mba hampifandray tsara ny lasitra. Mora ny manala ireo andriamby amin'ny toerany amin'ny alàlan'ny fitaovana famoahana manokana.
1T Type Magnet Stainless Steel Shuttering Magnet misy notch 2
1T karazana vatosoa marevaka marefo mamono vy dia habe mahazatra amin'ny famokarana singa sandwich pc maivana. Izy io dia mety amin'ny haavo bobongolo 60-120mm amin'ny haavony. Ny trano sy bokotra vy tsy misy fangarony 201 dia afaka manohitra ny harafesin'ny beton.
0.9m Halavan'ny andriamby sisin'ny andriamby miaraka amin'ny rafi-manasitrana 1800KG mifangaro 2pcs
Ity rafitra 0.9m halavan'ny sisin'ny lalamby ity dia misy mombamomba ny vy miaraka amina rafitra miady amin'ny herinaratra mahery vaika 2kh 2k, izay azo ampiasaina amin'ny fanamboarana formwork samihafa. Ny lavaka natao ho an'ny afovoany dia natao manokana ho an'ny famokarana robot amin'ny rindrina roa sosona.